SERASERA, TENY MALAGASY: 09/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 09/02/11
9 Février 2011, 21:10pm
Fitsarana an’i Fetison sy ny namany: Hivoaka anio maraina ny didim-pitsarana
Omaly no natao teny Anosy ny fitsarana an’Atoa isany Fetison Rakoto Andrianirina, Zafilahy Stanislas ary ny pasitera Edouard Tsarahame. Amin’ny maha mpitarika sy mpanentana azy ireo ao amin’ny Ankolafy telo, maro ireo mpitolona no tonga teny an-toerana nanotrona. Vokatr’izany dia, feno hipoka tokoa ny efitrano faharoa nanaovana ny fitsarana. Tazana teny ihany koa ireo mpitandro filaminana avy ao amin’ny Emmo Reg, nanara-maso sy nandamina ny filaminan’ny vahoaka. Nanomboka tamin’ny … (Suivre le lien)
Antoko politika Mijoro ny “Tia Tanindrazana”
Tia Tanindrazana. Antoko vaovao hanova ny tontolo politika eto Madagasikara indray io.
Ny vanimpotoana, ny zava-misy diavin’ny firenena sy ny iainan’ny Malagasy monina ao aminy, ny fivoaran’ny fifandraisana eran’izao tontolo izao dia tokony hanefy toe-tsaina tia tanindrazana, eny mitaky izany mihitsy sy hitia ny vokatra ao aminy ary manome hasina ny mpiara-belona sy ny fampivoarana azy anatin’ny fihavanana. Mazava fa dia hanorina fiarahamonina mirindra sy … (Suivre le lien)
Raiamandreny Mijoro Miketrika ny hananganana ny Komitin’ny fampihavanana ny Malagasy
Tonga nihaona tamin’ireo mpikambana ao amin’ny vaomieran’ny lalàna, vaomieran’ny fampihavanam-pirenena ary ny vaomieran’ny fametrahana ny repoblika fahefatra eo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita ny Raiamandreny Mijoro omaly talata 08 febroary.
Nitarika ny fihaonana ny Kestora faharoa, Ravelonjato Bernard. Ny anton’ny fivoriana dia ny fomba ahafahana manangana ny Komitin’ny fampihavanana ny Malagasy mba … (Suivre le lien)
Vahaolana avy amin’ny SADC Miandry aorian’ny 15 febroary
Omaly no nanao fivoriana atsy Afrika Atsimo mikasika ny raharaha eto Madagasikara ireo filoham-pirenena ao amin’ny vondrona SADC. Diso tanteraka ny filazana fa nanaiky ilay sori-dalana naroson’ny Dr Leonardo Simao izy ireo. Araka ny loharanom-baovao avy any Afrika Atsimo dia tsy misy inona mbola tapaka hatreto mikasika ny krizy malagasy. Ny zava-misy dia nangatahiny tolo-kevitra tsirairay avokoa ireo … (Suivre le lien)
Fitsarana an-dry Fetison- Mbola anio ny verdict
“Mety mbola naka toro-marika tany Ambohitsorihitra ireo mpitsara”
Ny hafa indray nilaza fa mety efa hain-dry zareo ihany ny didy tokony havoaka fa tsy te hanambara azy teo anatrehan’ireo vahoaka maro ny mpitsara
Mbola amin’ity andro anio ity vao hivoaka ny didim-pitsarana an-dry Fetison Andrianirina sy Zafilahy Stanisalas ary ny Pasitera Edouard raha efa omaly ny fitsarana.
Ry zareo avy amin’ny ankolafy telo raha nanontaniana ny … (Suivre le lien)
Ankolafy Zafy Albert
“Rehefa tsy mahazo fankatoavana i Andry Rajoelina dia miantso fifampidinihina »
Mbola manana fanantenana ny hisian’ny fifampidinihina avy amin’ny fitondrana FAT ny ankolafy Zafy Albert. Efa Ing. Andry Rajoelina mihitsy anefa no nilaza fa “tsy fotoanan’ny ady varotra sy ady seza intsony izao”. Voalaza ao amin’ilay soridalan’i Simao rahateo izay mety tsara amin’ny fitondrana FAT fa tsy ravana intsony ny andrimpanjakana efa mijoro fa hitarina fotsiny mba hidiran’ireo izay tsy mbola ao anatiny. “Rehefa tsy mahazo ny fankatoavana avy amin’ny sehatra iraisam-pirenena i Andry Rajoelina dia … (Suivre le lien)
"Aleo ho mpanohitra izay tsy miditra... "
"Samy maka ny andraikiny ny tsirairay manoloana ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao" , hoy ny filohan’ny Kongresin’ny tetezamita (Ct), Raharinaivo Andrianantoandro. Heveriny fa tokony "hiditra ao anaty sambo" avokoa ny rehetra mba hiara-mitantana, indrindra mba hiaraka hanara-maso ny fanomanana ny fifidianana. Ny
fifidianana no tanjona, fa ny Malagasy mpifidy no andriamanjaka amin’ny … (Suivre le lien)